Wasiirka xaalufiyay badda dalka oo 'naftiis' u baqaya | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaaliya - Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya, Maxamuud Xayir Ibraahim, ayaa ku eedeeyay saxafi Canadian ah iyo hay’ad aan dowli ahayn inay jabsadeen email-kiisa ayna qorsheynayaan inay dilaan, xilli ay socdaan baaritaanno ku aaddan kalluumeysiga sharci-darrada ah ee xeebaha Badweynta Hindiya.
Mr Ibrahim ayaa ka codsaday maxkamadaha Kenya inay soo saaraan amarro u diidaya saxafiga reer Canada, Jay Bahadur iyo hay’adda la dagaalanka dambiyada Abaabulan ee Caalamiga ah “Global Initiative against Transnational Organised Crime (Giato)” inay baaritaan ku sameeyaan kalluumeysiga sharci darrada ah ee ka dhacaya xeebaha Soomaaliya.
Wasiirka Soomaaliya ayaa udub dhexaad u ah baaritaanka Mr Bahadur uu ku hayo Shirkadda Kalluumeysiga ee “North East Fishing (Nefco)”, oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn gobolka ee kalluunka u dhoofiya Shiinaha.
NEFCO, waxay la shaqaysaa Ururo kalluumeysi oo ka jira Shiinaha, baaritaanka Mr Bahadur ayaana shaaca ka qaaday in inta badan kalluunka loo qaado dalka dhaca Asia, uu yahay mid loo maaro waddo shaarci darro ah, iyadoo garaab laga helayo saraaakiil sarsare oo ka tirsan Dowladda Soomaaliya.
Mr Bahadur iyo Giato oo fadhigeedu yahay Switzerland, ayaa baaraya dhowr mas'uul oo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo lagu tuhunsan yahay inay kalluumeysi sharci-darro ah ku gacan siinayeen muddo saddex sano ah shirkadda (Nefco).
Saxafiga u dhashay Canada, ayuu fadhiiisu yahay Kenya, waana qoraaga buuggii aadka loo ammaanay (Burcad -badeedda Soomaaliya).
Bahadur, wuxuu sheegay in Wasiir Ibrahim uu haysto baasaboor diblomaasiyadeed, sidoo kalana uu wato baasaboorada dalalka Kenya iyo Jabuuti.
Iyada oo loo marayo Giato, Mr Bahadur ayaa bishii hore daabacay warbixin baaritaan ah, waxuuna farta ku fiiqay dhowr mas’uul oo dowladda ah, oo uu ku jiro Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya, Maxamuud Xayir Ibraahim, oo gacan ka geystay kalluumeysiga sharci -darrada ah ee Badweynta Hindiya.
Warbixintu waxay sheegtay in mas'uuliyiinta dawladdu ay u adeegsadeen jagooyinkoodii si ay u helaan dib -u –laabasho, waxayna ruqsadaha kalluumaysiga si sharci darro ah u siiyeen shirkado ay ka mid tahay Nefco.
Mr Bahadur ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in Wasiir Ibrahim, oo ay ilmo adeer yihiin agaasimaha Nefco, Ciise Xaaji Faarax, uu horay uga soo shaqeeyay shirkadda, ka hor inta uusan ku biirin dowladda.
Ciisi X Farax walaalkiis, oo sidoo kale ay ilmo adeer yihiin Wasiir Ibrahim, Shire Xaaji Faarax, qudhiisu waa wasiir ka tirsan Maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya, qeyb weyn ayuuna ka qaatay wax is dabamarinta.
Mr Ibraahim iyo ina-adeerkiis, Wasiirka Puntland, Shire Xaaji, ayaa la sheegay inay la heshiiyeen mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, sida wasiirka kalluumeysiga Cabdullaahi Bidhaan Warsame, la -taliyaha sare ee kalluumeysiga Cabdiraxmaan Cismaan iyo agaasimaha guud ee kalluumeysiga Maxamud Sheekh Cabdullaahi Cabdiraxmaan – si loo naas-nujiyo Nefco.
Dacwadda uu Wasiir Dowlaha Maaliyadda Soomaaliya u gudbiyay Kenya, aya ah dadaalkii ugu dambeeyay ee lagu af-qabanayo weriyaha iyo Giato, si aysan u dhameystirin warbixinnadoona ku aaddan kalluumaysiga sharci-darrada ah, ee lagu dabar jarayo khayraaadka Soomaaliya.